Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1355
Jery todika taona 2015 : mitohy ny fifandroritana politika amin’izay mitranga rehetra
Par Taratra sur 05/01/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Hivaha tanteraka amin’izay ve ny disadisa politika amin’ity taona ity? Mitohy ny fifandroritana politika amin’izay mitranga rehetra, raha ny tamin’ny taon-dasa. Jery todika… Lasa adihevitra be ny amin’ny tsy fanajan’ny filohan’ny Repoblika ny fametrahana ny Fitsarana avo na ny Haute cour de justice (HCJ), ara-potoana: herintaona aorian’ny nandraisany fahefana farafahelany, araka ny And. 167 amin’ny […]
Hatramin’izao, mbola eo am-pitadiavana na fanamafisana fahamarinan-toerana sy fitoniana politika ny mpitondra. Anisan’ny antony nihazakazahana tamin’ny fifidianana senatorialy hijoroan’ny Antenimierandoholona izay. Antony tsy azo anoarana azy ny namitana ny fifidianana ao anatin’ny fahavaratra. Ambaran’ny mpahay lalàna sasany fa antoky ny fahamarinan-toerana sy fitoniana politika ny fijoroan’ny Antenimierandoholona. Tsy afa-mitory na manala ny filohan’ny Repoblika amin’ny […]
Raharaha kidnapping Toamasina : niely ny feo fa novonoin’ireo mpaka an-keriny i Arnaud
Par Taratra sur 05/01/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nahoraka tao an-drenivohitry ny faritra Atsinanana, omaly fa novonoin’ireo mpaka an-keriny koa i Arnaud. Voalaza anefa fa niezaka nifampiraharaha tamin’ireo jiolahy ny fianakaviany… Mbola mitana ny sain’ny mpanara-baovao ny raharaha fakana an-keriny an’i Annie sy Arnaud tao Toamasina. Hatry ny omaly kosa, niely ny feo manerana ny renivohitr’i Toamasina fa novonoin’ireo mpaka an-keriny i […]
Kakain’ny samy mpandraharaha : teratany srilankely maty novonoin’ny namany ihany
Par Taratra sur 05/01/2016 Divers, NS Malagasy
Hita faty tao an-tranony, tany Andilamena, ny teratany srilankey iray, 58 taona, ny alahady maraina teo. Araka ny fizahana nataon’ny dokotera sy ny zandary, voalaza fa novoina ity teratany vahiny ity. Nahitana ratra ny tenany ary nisy ihany koa ny mangana taminy. Raha ny fanazavana azo ihany, efa fantatra ny nahavanona ny famonoana, izay teratany […]
Anosiala : lehilahy maty nananton-tena
Raim-pianakaviana iray vao 25 taona monja no maty nananton-tena tao an-dakozia, ny asabotsy teo teny Anosiala Ambohidratrimo. Araka ny fanazavana voaray, manana olana ara-panambadiana izy satria nisaraka tamin’ny vadiny, ny taona 2015 lasa teo. Fantatry ny fianakaviany anefa izany olany izany ka tsy namela irery azy fa nasainy niara-nipetraka tamin’ny havany hatrany izy. Sendra izy […]
Par Taratra sur 05/01/2016 En Bref, NS Malagasy
Matin’ny fitsaram-bahoaka ilay lehilahy voarohirohy ho namono olona tany Vohitrambo Betampona Fenoarivo Atsinanana, afakomaly. Voalaza fa noahiahin’ny fokonolona ho namono lehilahy iray monina ao Ampasimazava Vavatenina izy. Nandositra izy rehefa avy nanao ny asa ratsiny ka raikitra ny fifanenjehana. Tsy namelan’ny fokonolona anefa izy ka tratra tao Vohitravo. Samy nanala ny fony tamin’ilay voarohirohy avokoa […]
Par Taratra sur 05/01/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Efa tapitra ny fe-potoana napetraky ny tomponandraikitra hanesorana ny fako eto an-dRenivohitra. Ny zava-misy anefa, mbola misavovona saika manerana ny tanàna ny fako. Mantsina ny rivotra iainana, ny orana rahateo mbola mitohy mirotsaka. Variana amin’ny inona ny tomponandraikitra ? Mbola mitoetra ary iainana ny fakon’ny taona 2015. Mijanona ho ambony latabatra hatrany aloha, hatreto, ny fitsinjovana […]
Par Taratra sur 05/01/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Raha voalaza fa aretina no nahafaty ity lehilahy iray, mpibata entana eny Andravoahangy, hitan’ny olona nitsitra teny an-dalana, omaly, noho ny daroka nahazo azy kosa no fantatra fa nahalavo ny lehilahy iray hafa, mpanasa fiara, eny amin’ny 67 Ha, ny alahady teo. Rangahy iray mpibata entana no hita faty teny amin’ny tsenan’Andravoahangy, omaly maraina. Teo […]
Filankevitry ny minisitra : nifarana ny asan’ny Cenit
Vita hatreto. Anisan’ny nivoitra tamin’ny filankevitry ny minisitra, ny faran’ny taona teo, ny fampitsaharana ny asan’ny Cenit, tarihin’ny filohany, Ralaiariliva Ndriana Mamy. Efa mitsangana rahateo sady efa niasa nanatanteraka ny fifidianana loholona Ceni, tarihin’ny filohany, Rakotomanana Hery. Tsiahivina fa anisan’ny rafitra natsangana, niainga amin’ny sori-dalana ny taona 2011 ny Cenit. Iraka nampanaovina azy ny fanatanterahana […]
Resaky ny mpitsimpona akotry : taona fampisehoana fahendrena
Par Taratra sur 04/01/2016 Elucubrations, NS Malagasy
Ampy izay ny fandaniana andro nolazaina nanaovana fanomanana sy fakana bahana, tsy resaka lazaina ho tena izy intsony no andrasana fa asa ary asa mamokatra. Apetraka eo amin’izay ny adiady na madinika na adilahy pôlitika, ady tsy vitan’ny fikarohana fifandanjan’ny fahefana izay samy manana ny azy na ny fanatanterahana na ny fanaovan-dalàna, fa fifanjevoana amina […]
Par Taratra sur 04/01/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nanamarika ny taona 2015 ho an’ny fanabeazam-pirenena ny fidirana ho an’ny fampianarana nomerika. Ankoatra ny fizarana « tablette » ho an’ny lycée 80, nametrahana fitaovana ahazoana herinaratra ny sekoly 15 miaraka amin’ny fitaovana informatika mahazo « connexion internet » avy hatrany. Hitondra fivoarana ho an’ny fampianarana ny zaza malaga sy ny hetsika izay hitohy amin’ny ivontoeram-pampianarana 1 000 amin’ity taona […]
Par Taratra sur 04/01/2016 Actualités
Mitohy hatrany ny “jery todika” eto amin’ny pejin’ny fanatanjahantena eto amin’ny gazety Taratra. Hoentina anao anio ny mahakasika ny taranja kick-boxing sy ny basikety sy ny zava-bitany nandritra iny taom-pilalaovana 2015 iny. Ho an’ny kick-boxing manokana, nahazoan’i Madagasikara vokatra tsara ity taranja ity eo amin’ny sehatra maneran-tany raha teo anivon’ny oseana Indianina kosa ny basikety. […]
Nitohy, hatramin’ny omaly, ny fety aman-danonana fanamarihana ny taom-baovao 2016. Raha nangina tanteraka ny tany anaty efitrano fanaovana fampisehoana, eto Antananarivo sy ny manodidina, tsy toy izany kosa ny tetsy Analakely sy teny amin’ny tsena, tsy lavitra ny Renivohitra. Nahazo laka, teny amin’ireny toerana ireny, ny mpanao vakodrazana. Any ambanivohitra any no tena ahitana itony […]
Fampianarana : manomboka ny telo volana faharoa
Miditra amin’ny telo volana faharoa ny mpianatra manomboka anio. Ny 18 marsa vao hifarana ny fianarana ary hiroso amin’ny fialan-tsasatry ny Paska indray hatramin’ny 3 avrily. Misy ny fitsaharana telo andro mandritra ny andron’ny sekoly 17 ka hatramin’ny 19 febroary hanadiovana ny efitrano sy hanaovana hetsika ara-panatanjahantena. Herin’ny taom-pianarana ny telo volana faharoa satria fotoana […]
Tsiahy – Mozika : nanamarika ny 2015 ny « gweta »
Na taty an-tanàn-dehibe na tany ambanivohitra, na tany amin’ny hotely sy « espaces » goavana na tany an-tokantrano, eny, hatreny an-dalambe aza, tsy nisy tsy nandihy tamin’ny « gweta », tamin’iny alin’ny faran’ny taona sy nitsenana ny taom-baovao iny. Tsy nahagaga ! Nanamarika iny taona 2015 iny ity gadona arahina dihy manokana noforonin-dry Toofan, avy any Togo, ity, raha ny […]
« Tsy mbola hampahafantarina izao ny drafitra vaovao hitondran’ny Fiombonan’ny fiangonana kristianina eto Madagasikara (FFKM) ny fampihavanana. Aleo handeha miandalana sy tsikelikely eo izany », hoy ny filohan’ny fiangonana anglikanina (EEM), ny Mgr Ranarivelo Samoela Jaona, ny faran’ny herinandro teo. Mijanona ho tsiambaratelo eo amin’izy ireo izany aloha izany paikady izany, manoloana izao hijoroan’ny rafitra vaovao ho […]
Feno ny voka-pifidianana ho an’ny faritany telo : noraofin’ny HVM ny seza 36 amin’ireo 41
Efa feno sy tonga eny amin’ny foiben’ny Ceni ny voka-pifidianana loholona ho an’ny faritanin’Antananarivo sy Toamasina ary Mahajanga. Noraofin’ny HVM avokoa ny seza 36 raha miainga amin’io vokatra io. Mbola andrasana ny voka-pifidianana avy any Fianarantsoa sy Antsiranana ary koa Toliara. Voalaza fa anisan’ny antony nahatara ny fahatongavan’ny voka-pifidianana amin’ireo faritra ireo ny haratsian’ny fifandraisana […]
Fikarohana an' i Arnaud : niakatra 20 ny olona naiditra am-ponja any Toamasina
Tsy mbola hita i Arnaud, tsy nahazoam-baovao ny sefom-pokontany. Ny olona any am-ponja no efa tafakatra 20, saingy tsy nisy vokany amin’ny fikarohana izany. Misoko miadana ary miakatra hatrany ny olona aiditra am-ponja vonjimaika momba ny fikarohana an’ i Arnaud, ilay ankizilahy nalaina an-keriny ny 23 novambra lasa teo ka mbola tsy hita popoka hatramin’ […]
Ao anatin’ny fisalasalana ! Hiverina tsikelikely ny fandrosoana ara-toekarena eran-tany amin’ity taona 2016 ity. Milaza anefa ireo mpahay toekarena fa tsy mbola hiharina araka ny tokony ho izy izany, toy ny talohan’ny taona 2007, fotoana nanombohan’ny krizy ara-bola. Miantraika aty amin’ny firenena andalam-pandrosoana izany satria mihena koa ny famatsiam-bola sy ny fampindramam-bola avy amin’ireo vondrona iraisam-pirenena, […]
Tombana sy vinavina : samy manana ny fijeriny ny taona 2016 ireo mpanao politika sy tompon’andraikitra
Iriana ny hipetrahan’ny fitoniana eto amin’ny firenena. Handray ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia sy ny Comesa isika amin’ity taona ity. Hanamarika ny tantara izany satria hiantraika amin’ny firenena sy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny ho vokany. Etsy andaniny, hohamafisina ny diplaomasia ara-toekarena efa natomboka ary hitombo ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombona antoka vahiny sy eo amin’ny […]
Faran ' ny taona Toamasina : tapatapaka hatrany ny jiro
Tapatapaka hatrany ny herinaratra tany Toamasina nandritra ny fetin’ny faran’ny taona fa tsy araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra. Ho an’ny firaisana dimy eto an-drenivohitr’ i Betsimisaraka aloha, saika niaina tao anatin’ny haizina sy tsy fisian’ny rano ny tontolon’ ny 30 desambra. Nitohy izany ny andron’ ny faran’ny taona 31 desambra, saika tapaka avokoa ny herinaratra tamin’ […]
Miarahaba sy mirary soa ho antsika rehetra nahatratra ny taona vaovao 2016 ny eto amin’ny gazery Taratra. Mba ho taona hitondra fiovana sy fanovana ho amin’ny tsaratsara kokoa anie ity taona hodiavintsika ity, fa tsy hoe ny dimy fotsiny no niova enina eo amin’ny tetiandro na ny kalandrie. Andrandraina sy antenanina izany, ho antsika rehetra […]
Maroantsetra : fametrahana kamiao niafara tamin’ny fitoriana
Mpandraharaha ara-toekarena iray, ao an-tampon-tanànan’i Maroantsetra, mahavelon-taraina ny mponina. Anisan’izany ny mpandraharaha iray namany anisan’ny niharan’ny antsonjay nataony. Ny talata lasa teo, teny anivon’ny zandarimariam-pirenena nahatonga ny solontenan’ny mponina sy ny mpandraharaha iray nampiaka-peo ka nitafa tamin’ny mpanao gazety. Araka ny fanazavana, mpandraharaha jirofo iray avy nividy kamiao, nindrana tokontany tao amin’ilay mpandraharaha voalaza no […]
Niantefa tamin’ny mpivarotra sy mpandalo iray ny hazobe tapaka teny Ambohijatovo, ny asabotsy antoandro teo. Nitarika ny fahafatesan’olona iray izany. Tapaka nandritra ny adiny iray ihany koa ny lalana vokatr’ity hazo tapaka ity. Nitrangana loza tampoka, antoandrobenanahary tao anatin’ny fahamainana tanteraka, ny teny Ambohijatovo ny asabotsy teo. Hazobe iray tapaka ary nitsivalana teo amin’ny arabe, […]
Par Taratra sur 02/01/2016 Actualités
Nalaza vetivety tampoka teo i Madagasikara tamin’ny nahazoan’i Mamonjisoa Sévérin ny tompondaka eran-tany teo amin’ny kick-boxing pro. Nitobaka kosa ny valin-kasasarana azon’ity maherifo ity. Mamonjisoa Sévérin. Mpikatroka kick-boxing malagasy eo amin’ny sokajy -60 kg, avy amin’ny klioba Cosrm 5, Toliara. Nandrombaka ny tompondakan’i Madagasikara inenina nisesy (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Tompondakan’i Afrika ihany […]
« Précédent 1 … 1 353 1 354 1 355 1 356 Suivant »